Sierra Club Endorses ny famoronana tontolo iainana - Ellicott Dredges Blog
2 Janoary 1999
Amin'ny fiaraha-miasa tsy mahazatra, ny mpiaro ny tontolo iainana, ny mpandoto, ny tanàna eo an-toerana ary ny maso ivoho miaro ny tontolo iainana dia miara-miasa amin'ny famonoana ireo basy misy poizina izay manakana ny Reniranon'i Ashtabula akaikin'ny Farihin'i Erie.
Ny tanjon'izy ireo iraisana dia ny fanombohana ny fandehanana ny renirano raha tsy misy ny fanarahan-dalàna sy fandalinana mahazatra amin'ny fanadiovana atao eo ambanin'ny lalàna Superfund.
Ny tohatra metaly mavesatra sy ny PCB no nahatonga ny fandotoana azy.
Ny fanarian-doha dia tsy vitan'ny fanadiovana ny fandotoana, fa hametrahana fivezivezena an-tsambo bebe kokoa amin'ny fantsona iray izay mankany amin'ny farihin'i Erie any Ashtabula, any amin'ny faritra avaratra atsinanan'i Ohio.
“Tsy olana ara-tontolo iainana fotsiny io. Tena olana ara-toekarena matotra io distrika io, "hoy i John Mahan, mpandrindra ny Ashtabula River Partnership, ezaka iraisan'ny mpiaro ny tontolo iainana, ny mpanara-maso, ny mpandoto ary ny kaominina.
Ireo zavatra mahaliana isan-karazany dia niara-niasa tamin'ny zavatra niainan'i Fields Brook, zana-trondro iray eo akaiky eo, izay napetraka tao amin'ny lisitry ny EPA Superfund momba ny olan'ny fahalotoan'ny firenena indrindra.
Toy ny tranokala Superfund hafa, nidina ny fandaniana ary nahemotra ny asa fanadiovana. Nisy ny marimaritra iraisana fa tsy maintsy misy fomba tsara kokoa. Hatreto dia mandeha ny fiaraha-miasa. Vao tamin'ity fararano ity dia nanampy fiteny ny volavolan-dalàna momba ny fandaniana EPA izay nandrisika ny maso ivoho mba tsy hamoaka didy momba ny dredging intsony.
Tsy voatery izany, fa “mampatahotra ny fironana,” hoy i Emily Green, manam-pahaizana Lakes lehibe manana ny biraon'ny afovoany Andrefana an'ny Sierra Club. “Raha manandrana manosika azy ireo indray izy ireo amin'ny taona ho avy, dia tena hisy fiatraikany lehibe amin'ny farihy.”
Matetika ny dredging no safidy fanadiovana satria maharitra izy io ary manakana ny fandotoana tsy hidina hilatsaka any ambany, hoy i Green.
Navoaka indray avy amin'ny Baltimore Sun tamin'ny alàlan'ny Associated Press